Covid-19: Tirada dayarta uu kudhacayo oo soo badanaysa - Tilmaan Media
Kadib markii la fududeeyay xanibaadihii loogu tala galay xakamaynta faafidda koronafayras, waxaa cirka isku shareertay tirada dadka dada yar ee laga helayo xanuunka. Baaritaan lagu sameeyay 6 malyan oo kiis, waxaa kasoo baxday kor ukac ku yimid dadka laga helayo xanuunka ee dadoodu udhaxayso shan iyo 24 jir.
Baaritaanka lagu sameeyay 6 da malyan oo kiis waxaa kasoo baxday in caruurta dadoodu udhaxayso 5-14 jir ee xanuunka laga helay ay kasoo kacday %0.8 ayna gaadhay %4.6. Halka kuwa dadoodu udhaxayso 15-24 ay kasoo kacday %4.5 ayna gaadhay %15.
Kor ukaca tirada dayarta uu xanuunka ku dhacayo ayaa sababaha waxaa kamid ah qaadidda xayyiraadihii lasoo rogay oo keentay in dad badan dareemaan inay xabsi kasoo baxeen isla markaasna si aan taxaddar lahayn dhexgal bulsho u sameeyaan.
” Isu-furidda socdaalka dadwaynaha wuxuu keenay isabddal kuyimaada habddhaqameedka dadka iyo in dhalinyaro badan horay iyo gadaalba usocdaan,ayna tagaan xaflado iyo munaasabado kala duwan. Habdhaqankaan ayaa keenaya in dhalinyaro waajahaan khattarta ah in Covid-19 kudhaco”. sidaas waxaa tiri Maria Van Kerkhove oo ah madaxga guddiga farsamo ee COVID-19 uqaabilsan WHO.
Waxaa kaloo sababaha kamid ah isbaddal kuyimid Istiraatiijiyadaha dalalka ee ilaalintta xanuunka. Bilawgii hore waxaa isha lagu hayay kiisaska khattartah ah laakiin gadaal waxay dowladuhu kor uqaadeen baaritaanada lagu samaynayo kiisaska aan khattarta ahayn. Arintaan ayaa keenaysa in dayar badan laga baaro fayraska.
Inkastoo dadka dada wayni ka khattar badan yihiin dhalinyarada, haddana WHO waxay sheegtay in dhalinyaradu ka ilaashanayn khattarta Covid-19. Sidaas darteed dhalinayrada waxaa laga rabaa in ay si firfircoon oga qayb qaataan xakamaynta xanuunka, iyagoo samaynaya waxkasta oo la isaga ilaalin karo kana qayb qaataan wacyi galinta la xiriirta khatarta Covid-19.
Siciid Deni oo lakulmay Guddiga Ku meel-gaarka ah ee Doorashooyinka Puntland